Toddobaadkan Madasha Sawirrada waxa inoogu marti ah laba sawir, Sawirka hore waa Axmed Sh. Faarax Colow oo loo yaqaannay Dhuxul.
Dhacdo waliba xusuus mudan, Ayaan waliba murugadeed iyo farxaded ba leh.
Ummad aan tariikh lahayni ummad ma aha, ummad aan qoraa lahaynina tariikh ma leh. Waxaan in badan akhriyay ama dhegaystay maqaallo (articles) badan oo uu qoray Boobe Yuusuf Ducaale.
Abaal-marinta hablihii imtixaannada ugu sarreeyay
Xafladdan oo lagu qabtay Hotel Maansoor subaxnimadii ay bishan Oktoobar ahayd 2da, 2011ka,waxa ka soo qayb-galay dadweyne iyo madax ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada,
Toddobaadkan Madashada sawirrada waxa marti inoogu ah saddexan Mujaahidiin ah oo saamayntooda ku lahaa halgankii hubeysnaa
Meel u ka yimid cid garanaysay ma jirin. Markii dalka dib loo xoreeyay ayaa arag la arko ugu horraysay. Nin dhib leh ma ahayn.
Xeerkii Maaliyadda ee SNM‏
Toddobaadkan waxaanu halkan idiin ku soo gudbinaynaa Xeerkii Maaliyadda ee ugu danbeeyay ee SNM. Xeerkani wuxu soo maray heerar kala duwan oo hadba waa la qabyo-tirayay,
Waa sawir taariikhiya oo ku taxan halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee SNM horseedka ka ahayd. Waxaan u malaynayaa bil ahaan in ay Juun ku beegnayd,
Fankii sahaminta jeebka iyo jabhadayntii
Waa Qormo kooban oo wax ka taabanaysa noloshii jabhadnimo iyo waayihii adkaa ee aanu sannadihii noloshayada ugu fiicnaa ku soo qaadannay.
Tacsi: Marxuun/Mujaahid Aadan Cabdi Ebyan
Annaga oo ah qoyska reer Ducaale Caynaan, gaar ahaan Boobe Yuusuf Ducaale, xaaskiisa iyo carruurtiisaba,
Xusuus-wadareed (Gorfayn Riwaayadeed)
Haa……Maba ay fogayn markii aanu indhaha iyo dhegahaba ula doogsin-cararray xaggaa iyo Ambassador Hotel Xagaagii dhawaa ee 2009kii.
Horumarka Gobollada: Is-barbar-dhiggaTogdheer iyo Sanaag
Waxaan marka hore u mahad-naqayaa Ilaahay, marka labaadna waxa mahad leh Mareegta dharaaro.com
Madasha sawirrada: ee toddobaadkan
Toddobaadkan waxa Madasha sawirrada inoogu marti ah sawir taariikhiya oo aan qaaday 18kii 1992kii iyada oo loo dabbaal-degayo sannad-guuradii 2aad ee Meey.